कति विशाल हृदय मेयर बालेन साहको ? दुई हात जोडर मागे माफी ! – Annapurna Post News
कति विशाल हृदय मेयर बालेन साहको ? दुई हात जोडर मागे माफी !
June 7, 2022 sujaLeaveaComment on कति विशाल हृदय मेयर बालेन साहको ? दुई हात जोडर मागे माफी !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबासीको मन जित्दै इतिहास रचेका यहाँका मेयर बालेन साहले फेरि एकपटक विशाल हृदय देखाएका छन् । बालेनले दुई हात जोडेर यहाँका मतदाता र बासिन्दासँग माफी मागेका हुन् ।
फुत्केको मन्त्रीपद फिर्ता पाए लगत्तै बोले प्रेम आले, हाम्रै पार्टीभित्रका चिप्ले चोरहरु भन्दै कसलाई आरोप लगाए ?
प्रहरी परिचालन गरेर बञ्चरेडाँडामाफोहोर फाल्न थालियो ,अवरोध गर्ने १४ स्थानीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ,
यिनै हुन् विद्युतको पोलबाट चढेर हेलिकप्टरबाट झर्ने पुरुष, जसले ताण्डव देखाउदा राज्यले १ करोड घाटा व्यहोर्‍यो
June 16, 2022 suja
बालेन र स्थापितको मतान्तर अहिलेसम्मकै उच्च, कसको कति ?